नेपाल आज | दसैँ हिन्दुहरूका लागि मात्र होइन, समस्त मानवका लागि हुन्’ (भिडियोसहित)
दसैँ हिन्दुहरूका लागि मात्र होइन, समस्त मानवका लागि हुन्’ (भिडियोसहित)
आइतबार, २८ असोज २०७५ गते प्रकाशित
काठमाडौं । हिन्दु धर्मशास्त्रका विज्ञ एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र गौतमले हिन्दुहरूको महान् चाड विजया दशमी समस्त मानव एवं विश्व कल्याणका लागि आदि शक्ति देवी दुर्गाको आराधना गरेर मनाइने पर्व भएको व्याख्या गरेका छन् । उनले दसैँको दस दिन देवी दुर्गाको शास्त्रोक्त एवं तन्त्रोक्त विधिबाट पूजा आराधना गरेर स्वयं दुर्गालाई नै सशक्तीकरण गरेर दुर्जनको नाश र स्वजनको रक्षा गर्ने प्रचलन रहेको पनि बताए ।
नेपाल आजसँग शारदीय उत्सवको महत्वबारे विशेष कुराकानी गर्दै डा. गौतमले भने, ‘यवांकुर अर्थात् जौको टुसा देवी दुर्गाको प्रिय पुष्प भएकाले घटस्थापनासँगै जमरा छर्ने प्रचलनको सुरुआत भएको हो । जौको रसले मानव शरीरमा पनि रोग नाश गर्ने हुनाले देवीलाई पनि त्यसले शक्ति प्रदान गर्ने शास्त्रीय मत रहेको छ । त्यसैले देवीलाई शक्तिशाली बनाएपछि मानव जातिमा आँसुरी प्रवृत्ति हटेर जाने विश्वास रहिआएको छ ।’
डा. गौतमसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
‘देवीको पूजा सात्विक, राजस र तामस गरेर तीन प्रकारले गरिन्छ । सात्विकमा फूल, अक्षता, चन्दन र नैबेद्य हुन्छ भने राजसमा बलिसहितको पूजा हुन्छ । यसका साथै कन्या अर्थात् कुमारी पूजा गर्ने चलन पनि रहेको छ । कन्या पूजा गर्नुको अर्थ हो, १० वर्षसम्म कि कन्याहरू देवी दुर्गाकी पार्षद् हुन् । यस्तै तामसमा नेवारी संस्कति मान्नेले देवीलाई बलिसहित मद् (रक्सी) पनि चढाउने गरिन्छ । महाकाली, महासरस्वती र महालक्ष्मी पनि दुर्गा स्वरूपिनी हुन् । देवीले विभिन्न कार्यसिद्धिका लागि अनेकन रूप धारण गर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ ।’
‘शक्तिका लागि महाकाली, धन, सम्पत्ति र ऐश्वर्यका लागि महालक्ष्मी र विद्या, बुद्धि प्राप्तिका लागि महासरस्वतीको उपासना गर्ने हो । यो शारदोत्सव हिन्दु जातिका लागि मात्र होइन । यो मानव मात्रका लागि हो यो संसारमा शक्ति, विद्या, बुद्धि र ऐश्वर्य नचाहिने कोही छन् ? मानवको कुरा त छाड्नुस् देवतालाई त शक्ति चाहिन्छ । त्यसकारण शारदोत्सवमा सबैले पूजा गर, सबैले मनाउ भनेर शास्त्रमा निर्णय गरिएको छ । यो मानव मात्रले मनाउनका लागि हो । हिन्दुहरूले मात्र मनाउने भन्ने होइन ।’
‘देवी सबैको हो । सूर्य, चन्द्रले कसैलाई पक्षपात गर्छन् ? त्यसैगरी माता भुवनेश्वरी देवी पनि त सबैको हो त । उनले यो जाति, त्यो जाति भनेर पक्षपात गर्दैनन् । उनको उद्देश्य हो सबैको रक्षा गर्ने हो । दुर्जनको नाश गरेर लोकको रक्षा गर्न देवीको आराधना गर्नु परेको हो ।’
‘विशेष गरेर पशु बलि दिनेले महाअष्टमी र महानवमीमा देवीको पूजाआराधना गर्ने गरिन्छ । भगवतीले रक्तपान गर्छिन् । त्यसैले ‘क्षुधा रूपेन संस्थिता’ भनेको हो । बलि चढाउनेको विरोध गर्ने मित्रहरूको तर्क शास्त्रसम्मत छैन । रक्त र रक्सी चढाउनुको मतलब नै देवीलाई शक्तिशाली बनाउने हो । गृस्थाश्रममा बस्ने क्षत्री जातिले अवश्य पनि बलि दिनै पर्छ । हिन्दुहरूलाई बलि नदिनुस् भन्ने अधिकार पशु अधिकारवादीहरूलाई छैन ।’
‘राज्यले तीन प्रकारको शक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ । ती हुन् प्रभु शक्ति, मन्त्र शक्ति र उत्साह शक्ति । यो तीन किसिमको शक्ति नभइकन राज्य चल्दैन, चलाउन सक्दैन ।’
डा. रामचन्द्र गौतम अध्यक्ष नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति